Fanondranana vehivavy any Chine : Olona dimy voasambotra -
AccueilSongandinaFanondranana vehivavy any Chine : Olona dimy voasambotra
31/08/2018 admintriatra Songandina 0
Tambajotra matanjaka. Efa an-taonany no nanaovana ny fikarohana ireo mpandefa vehivavy any Chine. Ela nitoratorahana ka nahavoa mason’angatra, izay no azo hilazana ireo olona ravan’ny polisim-pirenena avy eo anivon’ny enquête spécialisé Anosy, teny Ampasapito. Ny alatsinainy 27 aogositra lasa teo ny dimy mianadahy no voasambotra rehefa nahazoan’ny mpitandro filaminana fitoriana mahakasika ity asa maloto ity, izay vehivavy ny telo ary lehilahy ny roa tamin’izany. Mbola nahatrarana tovovavy iray nokasaina haondrana any amin’ny firenena sinoa ihany koa aza tao an-tranony tamin’ny fotoana nanaovana ny fisamborana. Araka ny fanadihadiana nataon’ireo polisy nandray an-tanana ny raharaha, dia am-panambadiana lehilahy sinoa ireo vehivavy alefa any Chine ireo. Mitentina 70 Tapitrisa Ariary hatramin’ny 160 Tapitrisa Ariary no vidin’ny ankizy iray azon’ireto mpivarotra olona amin’izany. Tamin’ny alalan’ny fitarainana tamin’ireo ankizy tamin’ny havany no nahalalana fa tsy asa araka ny nampanantenain’ireto farany no hita. Raha ny fanazavana voaray hatrany mantsy dia be karama io asa lazain’ireto mpisoloky io ka roboka ireo tovovavy. Io antony io no isan’ny mampitaraina ireo ray aman-dreny manan-janaka any Chine, izay manahy mafy tsy hahita ny zanany intsony, ka izao nametraka fitoriana teny amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana izao.
Misy tsy tafaverina
Raha ny fanampim-baovao ihany koa, dia misy tamin’ireo vehivavy nahondrana hatramin’ny taona 2017 no mbola tsy tafaverina. Tamin’ny alalan’ireo fitarainana tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera no niparitaka ny zava-misy mahazo ny sasany tamin’izy ireo, ary nanao ny fikarohana avy hatrany ny polisy. Niaiky ny zavatra vitany moa ireto tambajotra ireto, izay voalaza fa miara-miasa amin’ilay olona tena atidoha mpandefa ireo tovovavy ireo ihany koa. Hatolotra eo anatrehan’ny fampanoavana ny raharaha aorian’ny fanadihadiana. Ankoatra ireo mpandefa, dia efa misy vehivavy malagasy hafa voalaza fa mandray an-tanana ireo tovovavy amidy ireo ihany koa any an-toerana. Isan’ny paikadin’izy ireo amin’ny fanatanterahana ity asa ratsy ity ny fampitomboana ny taonan’ireo tovovavy, satria dia mbola misy ny tsy ampy taona amin’ireo vehivavy, hoy ihany ny loharanom-baovao. Raha any amin’ny tany arabo no tena malaza amin’ity fandefasana vehivavy an-tsokosoko, dia efa isan’ireo firenena mpanafatra izany ihany koa ry zareo teratany sinoa. Efa maro ny tambazotra ravan’ny mpitandro filaminana amin’ny fanaovana ity asa maloto ity, izay tena ahazoan’ireo mpandefa vola an-tapitrisany maro. Tsy mety foana anefa izany fa toa vao mainka aza mahazo laka ireo mpivarotra olona raha ny eto an-toerana. Efa nisy no naiditra am-ponja tamin’izany, saingy nisy ihany koa no voalaza fa nahazo fahafahana vonjimaika tamin’ity resaka fanondranana vehivavy ity.
Filohan’ny fitsarana ambarantonga voalohany : Fandikan-dalàna ny fanohintohinana ny raharaham-panjakana